silicone hita - China Shanghai Pamaens Technology
Silicone hita ndiye dzakatetepa firimu rine mhando iyo rinopisa pamusoro yakafadza, mune mwero Ukobvu 1.5 kusvika 5 neMM, nokuzvitorera nickel Chrome waya kana 0,05 mm ~ 0.10mm gobvu nickel Chrome AKAITA chinopinda vamwe mamwe zvitarisiko, rokuti kudziyisa wakatesvererwa nokupisa achiitisa uye insulating zvinhu kumativi ose, uye akapedza pamatunhu-tembiricha kufa dzichiumbwa uye kuchembera kupisa kurapwa.
Supply Mano: 10000 Pieces pamwedzi
Production nguva: 7-15 mazuva
Max wattage arambe achirema
6 w / ba masendimita zvichienderana kushanda
anenge +/- 5%
260 Deg C kana 500 Deg F
kana -50 Deg C -58 Deg F
Atorwa bhokisi / Fumigation vakasununguka yemapuranga CAS
Silicone rabha / regirazi faibha Akazadzisa silicone rabha
Flame Retardant, uye mwando uchapupu
Thermal fiyuzi, thermostat, thermistor uye PT100
mumwe matatu metres pamwe customized chivhariso
Introductions kuti Silicone hita
Silicone hita ndiye dzakatetepa firimu rine mhando iyo rinopisa pamusoro yakafadza, mune mwero Ukobvu 1.5 kusvika 5 neMM, nokuzvitorera nickel Chrome waya kana 0,05 mm ~ 0.10mm gobvu nickel Chrome AKAITA chinopinda vamwe mamwe zvitarisiko, rokuti kudziyisa wakatesvererwa nokupisa achiitisa uye insulating zvinhu kumativi ose, uye akapedza pamatunhu-tembiricha kufa dzichiumbwa uye kuchembera kupisa kurapwa. Nokuda kwayo yakakwirira rakavimbika, chigadzirwa iri kwazvo makwikwi kana kuenzanisa nevamwe yemagetsi kudziyisa firimu zvigadzirwa izvo anowanzoita vane namatidza zvinhu zvakadai graphite namatidza kana resistor namatidza, etc. zvemapuranga pamusoro kuputira zvinhu. Sezvo rudzi dzakapfavirira dzvuku firimu chinogona kushandiswa achikudzwa siyana curved hukawanika, kuti nesilicon rabha hita inogona akagadzira mukati dzinosiyana zvitarisiko uye masimba.
The chinoratidza Silicone hita
1. Fast kudziyisa ane coefficient nokupisa conductivity ose 1w chete / Mk Nokuda kwayo chafariz kugona duku, nokukurumidza dzoro pamusoro / kure kunogona kubudirira.
2. High chafariz kunyatsoshanda: The tembiricha kuti yemagetsi kudziyisa firimu pachayo chete makumi ezviuru muzana epamusoro kupfuura mvura kana muchidziisa, inova 2-3 nguva simba rokuponesa kupfuura zvavo yemagetsi Stoves.
3. Mvura, asidhi uye alkali nemishonga, mukuru-simba yemagetsi kuputira.
4. High simba zvemaziso pamwe makirogiramu 100 / cm² zvokuimba kumanikidzwa.
5. Small size: Small nzvimbo inogarwa kana kushandisa ichi kudziyisa chigadzirwa.
6. Easy kushanda: Its nokuzvidzora kuputira uye wakasununguka-of-yakazaruka-moto pfuma kubatsira zvikuru nyore unyanzvi nokupisa Kuchengetedzwa uye kumbogadzirwa kuti mudziye.
7. siyana yaro tembiricha, -60 ° C ~ 250 ° C, haagoni nyore kubudirira nedzimwe midziyo yemagetsi.
8. Long yakazara: Under dzose kushandiswa, chigadzirwa rinenge anogona kuva zvechigarire uye akaramba kushandiswa nekuti nickel uye Chrome zvinhu zviri yakasimba chero ngura, uye silastic ane yakakwirira pamusoro kuramba kusvikira 100kg / cm², riri uncomparable kuti chero dzemagetsi Heaters.
9. kunohumwe kukura, tembiricha iri chigadzirwa zvinogona chaizvoizvo kuchinjwa nokuda tembiricha controller.
Mafomu ose Silicone hita
1. Industrial zvokushandisa, mapaipi, emiti, matangi, etc.
2. Outdoors telecommunication michina
3. midziyo Medical uye namano
4. Outdoors zvemagetsi
5.Thermal kuri pamusoro kuri michina
6. Case kuchengetedzwa pasi chando uye nyoro ezvinhu
7. Industrial yamavira uye chafariz kugadzira midziyo
8. Ventilator zvitsigiso
9. Laminating midziyo
1. divi rimwe tangi
3. Imhandoi zvinhu mukati tangi
4. Chii kutanga tembiricha kwemashoko
Previous: Mica Band hita
Next: kuputira Mabhachi nokuti vharafu
200l Silicone hita
200l Silicone Rubber hita
3m Silicone hita
55 Gallon Silicone hita
chinopinda angazvidzvisa Silicone hita
Zvichienderana Silicone hita
Zvichienderana Silicone Rubber hita
Silicone Band hita
Silicone Zvichienderana hita
Silicone hita Pad
Silicone Pad hita With Thermostat
Silicone Rubber Belt hita
Silicone Rubber Zvichienderana hita
Silicone Rubber hita
Silicone Rubber Pad hita